Ukulahla inkunkuma ngemisebenzi emininzi ngumatshini wokulahla inkunkuma
Ukulahla umatshini ngemisebenzi emininzi umatshini wokulahla inkunkuma ! Ukulahla kukutya okuthandwayo kwabasentla. Bahlala bengahlulwa kwidombolo ngexesha lomnyhadala woNyaka oMtsha kunye nokwamkela izihlobo kunye nabahlobo. Ngokukodwa kusuku lokuqala lonyaka omtsha, usapho lutya amadombolo kunye. Kuyabonakala ukuba amadombolo anesikhundla esiphakamileyo kwiintliziyo zethu.
Imbali yophuhliso lweedombolo inde kakhulu. Ngamawakawaka eminyaka, amadombolo yenye yokutya abantu abathanda kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho mntu uya kuziva engaqhelekanga kwidombolo. Ngoku ukuba iintsuku zilungile, ukutya amadombolo kuye kwaba ngumsebenzi oqhelekileyo. Akunyanzelekanga ukuba utye amadombolo ngexesha loMnyhadala weNtwasahlobo. Amashishini amaninzi okupheka aseke indawo yokutyela yokulahla inkunkuma enedombolo njengesihloko sabo. Ngale ndlela, amadombolo akho kuyo yonke indawo. Ngale ndlela, baninzi nangakumbi abasebenzi abenza amadombolo. Ngophuhliso loluntu kunye nokuphuculwa kwenqanaba lezoqoqosho, imivuzo yabasebenzi inyukile ngokunyuka kwamaxabiso, nto leyo eza kuzisa iziphumo ezibi kwindawo yokulahla inkunkuma.
Le theyibhile 900t dumpling umatshini oluphuhliswe kwabasebenzi Jiangbei Fuxin oomatshini ukutya yenzululwazi kunye obuchwepheshe umatshini humanized kakhulu ukuvelisa amadombolo. Lo matshini unepaneli yolawulo echanekileyo kwaye ulunge ngakumbi ekusebenzeni nasekugcinweni. Yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engeniswe ngaphandle, enokusetyenziselwa ixesha elide, kwaye imilo ikwinqanaba eliphezulu kakhulu.
Ubungakanani, ubunzima kunye nomyinge wesikhumba kunye nokufakwa kwezinto ezilahliweyo kumatshini wokulahla zinokuhlengahlengiswa ngokuthanda, okuthintela ngokupheleleyo iimeko ezibi njengokuvuza kunye nokuqhekeka. Izidombolo ezivelisiweyo zinwebeka ngakumbi, incasa, i-gluten kunye nomonde, kwaye zinezibonelelo ezininzi ngokuthelekiswa needombolo eziveliswe ngesandla.
Lo matshini unokuvelisa iimveliso ezinobungakanani obahlukeneyo. Imeko kukuba i-wonton, i-potstickers, i-lace dumplings, i-Sifang dumplings, njl njl zinokuveliswa ngokutshintsha ukungunda. Lo matshini unokwenziwa ngaxeshanye xa uvelisa amadombolo, anokuthi aphucule ngcono ixabiso lesondlo sedombolo, ukwandisa ubomi beshelfu kwaye uphephe iimpazamo, Ngumatshini olungileyo onceda abathengi ukuba benze imali eninzi.
Idilesi: kwilali yaseXiashan, isitalato i-hongtang, isithili sase-jiangbei, isixeko sase-ningbo, iphondo le-zhejiang (indawo yemizi-mveliso A)
-Mfono Imfono mfono: +86 18067568290
© Copyright - 2010-2019: All Rights Reserved. Products afakiwe - eKhaya - Indawo Mobile
oluzenzekelayo iyabiliswa wafaka Bun Machine , iyabiliswa abotshwe Bun Machine Ukwenza , wafaka iyabiliswa Bun Machine , Pan-Fried iyabiliswa abotshwe Bun Machine , iyabiliswa wafaka Bun Machine , Household iyabiliswa wafaka Bun Machine , Zonke iiMveliso